Nyochaa LG G Pad 10.1 | Gam akporosis
Y’oburu n’echiche inweta ihe ohuru Mbadamba ụrọ gam akporo, ezigbo mma na ọnụ ala Na nkọwapụta teknụzụ ndị a na-anabataghị maka ndị ọrụ gam akporo kachasị na njikwa ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri, egbula oge maka nkeji ma gaa n'ihu na-agụ post a ebe ọ bụ na ị ga-enwe mmasi na nyocha ahụ anyị na-aga soro iji chee.
Mbadamba ụrọ dị na ya bụ LG G Pad 10.1, a dum nnukwu format mbadamba, 10,1 ″ ihuenyo na ahụkebe processor Qualcomm Snapdragon 400, Quad Core na 1,2 Ghz kachasị ọsọ elekere na gigabyte nke RAM nke na-enye anyị ike zuru oke iji rụọ ọrụ ndị a na-ahụkarị maka ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo.
2 Ihe kacha mma nke LG G Tab 10.1
3 Ihe kacha njọ LG G Pad 10.1
5 Foto osisi
Nlereanya LG G Kedo akwa 10.1 LG V700
Usoro njikwa Android 4.4.2 Kit Kat
Ihuenyo 10'1 "IPS 1280 x 800 mkpebi 160 ppi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 400 Quad isi na 1'2Ghz
Nchekwa ime 16 Gb enweghị nkewa
Rear igwefoto 4'9 Mpx na-enweghị FlasLED
Igwe n'ihu 1 Mpx
Batrị 8000 mAh
Ihe 260'9 x 165'9 x 8'9 mm
Ibu ibu 523 grams
Ahịa 189 Euro
Ihe kacha mma nke LG G Tab 10.1
N’enweghị mgbagha nke kachasị mma LG G Pad 10.1 anyị nwere ya na ọnụahịa nke ọnụ ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta mbadamba 10 Android ihuenyo gam akporo na Snapdragon 400 processor na-arụ ọrụ zuru oke na mkpebi HD ihuenyo a, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike igosi ma ọ bụ pụta ìhè ebe ọ bụ na ihe atụ ya IPS ihuenyo na-egosi anyị oke agba agba Mkpebi na nkowa ebe isi ihe na ihe omimi zuru oke iji nye ezigbo arụmọrụ kacha mma na oriri batrị.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụda na, ọ bụ ezie na enweghị ike ịnụ ka a na-anụkarị ya na gburugburu ebe mkpọtụ, ụda stereo na ogo ya dị mma na gburugburu izu ike ebe mpụga mkpọtụ dị ntakịrị.
Isi ihe ọzọ dị na ihu ọma a na-achọta na ngwa LG naanị dị ka ọmarịcha Ngwa ngwa ngwa nke ahụ na-enye anyị ohere jikwaa ngwaọrụ ọ bụla dị ka stereos, televishọn, ihe ndozi TV dijitalụ dị nnọọ site na-atụ ya na-ahọpụta emeputa si ika nke ngwaọrụ site na ya obosara ndepụta nke dakọtara na ngwaọrụ. Anyị nwekwara ike mata gị ọrụ ngosi abụọ nke ahụ na-enye anyị ohere ịme ngwa abụọ n'otu oge, na-agbanwe nha ihuenyo n'otu n'otu maka ngwa ọ bụla na-agba ọsọ.
Ọzọ nke LG nwere ngwa gụnyere na nke a na-akpali akpali gam akporo Tablet, anyị nwere ike ịhụ ya n'okpuru aha nke QPair, ngwa na-akpali akpali nke anyị nwere ike ibudata na ama gam akporo anyị, nke ga-enyere anyị aka ịchịkwa ọkwa ndị anatara na ama ama anyị na LG G Pad 10.1, Gụnyere oku na ozi anatara. O doro anya na nke a bụ ezigbo nhọrọ dị mma na LG G Pad nke na-enye anyị ohere ịhapụ onwe anyị nke ama anyị ma lekwasị anya na ọrụ anyị na-eme na mbadamba nkume na-enweghị atụ ụjọ ịhapụ ọkwa ọ bụla dị mkpa, oku ma ọ bụ ozi.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bara uru ịkọwa ya 8000 mAh nnukwu batrị ike nke na-enye anyị ihe kwụụrụ onwe nke ihe ọ bụla ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị n'etiti awa iri ma ọ bụ iri na otu nke na-aga n'ihu n'ihu na ihuenyo ojiji, na mgbakwunye na nke ya enweghị nchekwa nchekwa n'ime ụlọ nke ahụ na-enye anyị ohere iji ohere niile dị maka ntinye nke ngwa na egwuregwu.
Ihe kacha njọ LG G Pad 10.1
Otu n'ime ihe kachasị njọ anyị nwere ike ime maka LG G Pad 10.1 a bụ ụdị gam akporo ugbu a nke arụnyere, nke bụ onye ọzọ karịa Android 4.4.2 Kit Kat, ọ bụ ezie na nke a anyị chere na ọ naghị ewe oge iji gbazie ụmụ okorobịa na LG ma melite gam akporo Lollipop.
N'aka nke ọzọ na dịka m gwaworo gị mbụ, ọ bụ ezie na ọ nwere oke ụda dị mma na gburugburu izu ike, ọ na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ n’ebe ndị mmadụ juru ebe njikọ nke ekweisi ga-adị mkpa iji nwee ike ige ntị na ọdịnaya nke ọtụtụ ọnọdụ anyị n'ọnọdụ kachasị mma.
Akụkụ ọzọ na-adịghị mma ebe ha dị bụ na ha abụọ ihuenyo IPS na azụ azụ roba bụ ezigbo nju igwe na nke kachasị, ijide akara nke mkpịsị aka anyị na ojiji nke ngwaọrụ kwa ụbọchị.
Onye edemede: 45%
HD ihuenyo mkpebi
Ebe nchekwa nchekwa nchekwa na-abụghị nkewa
LG Nanị ngwa na atụmatụ
Ndụ batrị dị ukwuu
Ihuenyo na-enweghị ọgwụgwọ nke na-ahapụ ọtụtụ mkpịsị aka
Rubberized azụ na-adọta a otutu unyi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa LG G Pad 10.1, mbadamba 10 dum nke ihe na-erughị 200 euro
Gam akporo Wear na-enweta eriri ọhụrụ site na ndị nrụpụta dị iche iche